I-HTC ilungisa ifowuni entsha ngetekhnoloji yeBlockchain | I-Androidsis
Iintsuku ze-HTC zibaliwe. Kubuhlungu umphefumlo wam ukuyithetha kuba ndandingumlandeli wokuqina wophawu, ndisaqhubeka ngothando ukugcina iHTC One M7 yam ezukileyo. Kodwa inkampani yaseTaiwan yenze kakubi kakhulu kwimarike yemfonomfono kwaye igwetyelwe ukuphela. Kodwa, inkampani ifuna ukuhla kakhulu. Okanye u-Chen Xingshen, uMlawuli wezeMisebenzi nokuVavanyelwa.
Kwaye ke, eli gosa liphezulu le-HTC lisebenzise amandla eliwenzileyo kwiForam yeZicelo yaMazwe ngaMazwe yokuSasaza ukwazisa ukuba inkampani yaseTaiwan iyasebenza ukumilisela iHTC Eksodus entsha Oko kuyakuma ngaphandle kobuchwephesha beBlockchain.
Ewe, i-HTC iyaqhubeka nokubheja ekusunguleni iitheminali ezinemveliso encinci kwimarike
Yaziswa ekupheleni konyaka ophelileyo, i-HTC Eksodus ayibanga nampumelelo eyayilindelwe yinkampani. Ngokwesiqhelo, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-cryptocurrency bubble iqhume kwaye ixabiso lazo lemarike liwe ngokumasikizi. Kodwa inkampani isafuna ukubheja kwifowuni esivumela ukuba siyisebenzise njengesipaji. Ngokuchanekileyo, i Umsebenzi ofanayo njenge-Samsung Galaxy S10.
Ukongeza, okuhle kweXingshen ukwabhengeze ukuba esi sixhobo siza kubonelela ngendawo ekhuselekileyo, ngokubheja kwimodyuli yezokhuseleko ezimeleyo kwinkqubo yokusebenza ukuze sikwazi ukugcina ii-cryptocurrensets kunye nedatha yabucala ngaphandle kokukhathazeka malunga nokubiwa kolwazi. Ngokucacileyo, umphathi ophezulu we-HTC akalunikanga ulwazi malunga nendlalifa yeEksodus, kodwa sinokucinga ukuba iya kuba sisilo.
Okungakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba ifowuni yokuqala ye-HTC enobuchwephesha be-blockchain yeza neprosesa yeQualcomm Snapdragon 845 kunye ne-6 GB ye-RAM, i-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi kunye nescreen esine-intshi ezi-6 ngesisombululo se-QHD +. Umhla wokukhutshwa kwawo? Imfihlakalo, nangona sinethemba lokuba iya kufika kamva kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » I-HTC ifuna ukubulala: iya kuvula i-smartphone entsha ngetekhnoloji ye-blockchain